UK: xaqiijinta da'da loogu talagalay booqdayaasha goobaha pornographic waxaa lagu hirgelin doonaa 15 July - xnxx - TELES RELAY
ACCUEIL » kale UK: Xaqiijinta da'da ee loogu talagalay booqdayaasha bogagga internetka ee sawirrada waxaa laga hirgalin doonaa illaa 15 Luulyo - xnxx
Boqortooyada Midowday: Xaqiijinta da'da dadka booqanaya goobaha pornographic waxaa lagu hirgelin doonaa 15 July - xnxx
TELES RELAY 24 April 2019
Meelo muujinaya fiidiyowyada galmada iyo fiidiyowga waa kuwo aad u tiro badan. Helitaanku caadi ahaan waa mid aad u fudud oo uma baahna qaabab gaar ah, xitaa kuwa yaryar. Dawladda Ingiriiska ayaa soo saartay sharci mamnuucaya carruurta yaryar inay galaan filimmo. Waa la fulin doonaa laga bilaabo 15 July 2019.
Ilaa hadda, sharcigu ma xakameynayo galaangalaha goobaha pornographic ee UK, sharciga cusub ee dhaqaalaha digital-ka uu u codeeyo Xildhibaanada Ingiriiska ayaa badali doona xaaladda.
Mashruucyada ay khuseyso waa kuwa leh ujeedo ganacsi oo dhiirigelineysa sheekooyinka qatarta ah ee fiidiyowga ah iyo fiidiyowyo muujinaya falalka galmada.
Sida laga soo xigtay tirakoobyada, ku saabsan 88% waalidiinta carruurta leh ee ka yimid 7 ilaa sanadka 17 waxay ku qanacsan yihiin sharcigan UK.
Sidee baa goobuhu u eegayaan da'da dadka isticmaala Internetka?
Guddiga Sare ee Naadiga Filmka waa hay'adda mas'uulka ka ah kormeerka barnaamijka. Sida laga soo xigtay afhayeenka, habka dhallinyaradu u fahmaan xiriirka caafimaadka leh, jinsiga iyo oggolaanshaha way isbedeli karaan marka la helayo goobo muuqaal ah oo sahlan.
BBFC ma soo rogi doonto habab gaar ah oo lagu hubinayo da'da dadka isticmaala. Waxay, si kastaba ha ahaatee, u siin doontaa goobaha fursado dhowr ah oo u oggolaanaya inay buuxiyaan shuruudaha sharciga.
Si loo xaqiijiyo aqoonsiga booqdayaashooda, goobaha qaangaarka ah ayaa laga yaabaa inay doortaan hababka ugu caamsan, sida weydiinta lambarka kaarka deynta. Waxa kale oo laga yaabaa inay ubaahan yahiin macluumaadka ay soo saarto dawladda UK.
Si kastaba ha noqotee, sidaasi daraadeed goobahaas aysan isticmaalin macluumaadka gaarka ah ee dadka isticmaala, waxaa lagu maamuli doonaa Xeerka Guud ee Xogta Guud ee Midowga Yurub.
Maxaa ciqaab ah oo loogu talagalay goobo aan ixtiraameynin sharciga?
Markii hore, sharcigan Britishka wuxuu markii ugu horreysay qiray qaab kale oo ku jira qaabkiisii ​​hore. Sharcigu wuxuu ku soo rogay ganaaxyada boggaga X ee aan fulinin xaqiijinta da'da. Maaddaama qaar badan oo aan Ingiriisi ahayn ay sii wadaan inay si siman u shaqeeyaan iyagoo si fudud u diidaya ganaaxyadan, xukuumaddu waxay go'aansatay inay doorato hab cusub oo cusub.
Laga bilaabo bisha soo socota July, goobo ganacsi oo aan sawirin da'da dadka isticmaala Internetka ayaa la gelin doonaa liiska madow. Tani waxay ku saabsan tahay shabakadaha Ingiriiska iyo caalamka labadaba. Kuwa ku jira liiska madow waxaa xakameyn doona Adeeg bixiyayaasha Internetka ee Ingiriisiga (ISPs) oo adeegga lacag bixinta ayaa sidoo kale la diidi doonaa.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore http://www.fredzone.org/royaume-uni-verification-dage-pour-les-visiteurs-de-sites-pornographiques-a-compter-du-15-juillet-776
Fikradda | Ma la kulantaa saxaafadda? Ha dhibin - New York Times
Duumada: Dareemidda dhimashada